प्रोफेशनल अलीबाबा तातो उत्पादहरूमा सम्झौता बिक्री बिक्री पॉलिएस्टर | Rayson
रेसन औद्योगिक क्षेत्र, हूशा रोड, शीशान, फोशन उच्च-टेक जोन, गुआंग्डोंग, चीनमा। मुख्य उत्पादनहरू पेशेवर अलीबाबा तातो उत्पादकहरूमा गर्म उत्पादहरू सम्झौता बिक्री पॉलिएस्टर
रेसनको गुणवत्ता ग्यारेन्टी गरिएको छ। यसको निर्माण प्रक्रिया खरीदार सुरक्षा मा केन्द्रित गर्दछ प्रसंस्करण को दौरान सुरक्षा मापदण्डको अनुपालन सुनिश्चित गरेर।
ग्राहकहरु जो हाम्रो नयाँ उत्पाद को बारे मा अधिक जान्न को लागी वा हाम्रो कम्पनी, केवल हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। यसका साथै, हाम्रो डेलिभरी समयमै हो र हरेक ग्राहकको आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्दछ। वर्षौंको विकास पछि, हामीले विश्वभरि हाम्रा ग्राहकहरूसँग दीर्घकालीन सहयोग सम्बन्ध स्थापित गरेका छौं। कृपया सुनिश्चित हुनुहोस् कि हामीसँग हाम्रा उत्पादनहरू निर्यात गर्ने अधिकार छ र वितरित सामानहरूमा त्यहाँ कुनै नोक्सान हुनेछैन। हामी तपाईको जिज्ञासालाई स्वागत गर्दछ र कल गर्दछौं।
तपाईको गद्दा कति लामो हुनुपर्छ? हरेक गद्दा फरक छ। यदि तपाईं रातमा टास गर्नुहुन्छ वा दुखाइका साथ उठ्नुहुन्छ भने यो उमेरलाई ध्यान दिएर नयाँ गद्दा प्राप्त गर्ने समय हो। हामी कानून ट्याग जाँच गरी कम्तिमा प्रत्येक आठ बर्षमा प्रतिस्थापन गर्न सिफारिस गर्दछौं। म केहि नमूनाहरु लिन सक्छ？ तपाईं हाम्रो प्रस्ताव पुष्टि भए पछि हामीलाई नमूना लागत पठाउनुहुन्छ, हामी १ send ~ २० दिन भित्र नमूना समाप्त गर्नेछौं। तपाईले एक्सप्रेस कम्पनीलाई हाम्रो कम्पनीबाट नमूना लिन को लागी सोध्न सक्नुहुन्छ वा तपाईले हामीलाई DHL, FedEx वा UPS स account्कलन खाता नम्बर पठाउन सक्नुहुन्छ, हामी तपाईको खाताबाट नमूना पठाउन सक्छौं? के म तपाईको कारखानामा जान्छु? हो, हाम्रो कारखाना कुनै पनि समय भ्रमण गर्न स्वागत छ, हामी गुआन्झाउ Baiune अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको नजिकै छौं, यो केवल एक घण्टा कारले लिन्छ, र हामी तपाईंलाई कार लिनको लागि कारको व्यवस्था गर्न सक्दछौं।